Wax Ka Baro Shaqaalaheena Cajiibka Ah »Jaamacadda Hodges
Tacliinta Sare Waxaa Baray Xirfadlayaal Waxbartay
Hodges U Kulliyadda & Shaqaalaha
Hodges U waxay bixisaa waxbarasho hal nooc ah oo aan laga heli karin meel kale ha ahaato haddii aad waxbarashadaada ku heleyso xerada, khadka tooska ah, ama qaab isku dhafan. Sababta Kulligeena, Kulliyadaha Iskuxirka, iyo Shaqaalaha waxay leeyihiin hal ujeedo - si ay kaaga caawiyaan inaad guuleysato! Hadaanu nahay Hodges, waxaan fahansanahay caqabadaha ardayda qaangaarka ah ee leh xirfad iyo waajibaad qoys. Taasi waa sababta aan ugu xuubsiibnay inaan ku siino aaladaha aad ugu baahan tahay inaad ku guuleysato xagga waxbarashada iyo xirfaddaada.
Deans-ka mid kasta oo ka mid ah dugsiyadeenna waxaa ka go'an guushaada. Waxay waqti siiyaan inay kula kulmaan si ay kaaga caawiyaan inaad ka gudubto caqabado kasta oo aad la kulmi karto. Siyaasadda albaabka furan waxay ka dhigan tahay in mid kasta oo ka mid ah Deans-kayaga uu heli karo. Fadlan gaarsii, xitaa haddii kaliya inaad isbarto Jaamacadda Hodges, Deans-kayaga waxay kaa doonayaan inaad ku gaarto hadafyadaada waxbarasho! Aynu kaa caawinno intaad socoto.
Iyada oo xubnaheenna Kulliyadda, waxaad ka heli doontaa macallimiin hawl-kar ah iyo hawl-wadeenno ku takhasusay oo bixiya waxbarasho hal-ilaa-hal kulliyad ah oo aad u qalanto. Qiyaasta fasaladayada yar yar waxay fududeyneysaa helitaanka dareenka shaqsiyeed ee muhiimka kuu ah si aad u gaarto yoolalkaaga waxbarasho iyo xirfadeed. Barashadu waa guul nololeed inta aad nooshahay oo dhan waxaana halkaan u joognaa inaan ku taageerno maaddaama aad baahidaada aqoon dheeraad ah u korayso. Waxaa intaa sii dheer, maxaa yeelay xubnahayaga jaamacadeed waxay khibrad u leeyihiin dhinacyada ay wax baraan, waxaad baran doontaa in ka badan aragtida wax badan oo aad barato ayaa lagu dabaqi karaa booskaaga hadda.
Shaqaalaheenna ayaa halkan adiga kuu ah. Laga bilaabo salaantayada ilaa aqbalida kaalmada maaliyadeed iyo shaqaalaha xarumaha adeegayaasha halyeeyada - waanu kugu soo koobnay. Shaqaalaheennu waxay halkan u joogaan inay ku caawiyaan tallaabo kasta oo aad qaaddo, xitaa ka-qalin-jabinta.
Raadinta Tusaha Shaqaalaha